Maxay xambaarsanayd booqashadii DDS, ee tuuloyinka Qabaalle iyo Carrada-madow ee duleedka magaalada Jigjiga? - Hargeele - Wararka Somali State
7 dii bishan ayaa wafdi isugu jira heer-deegan, heer-gobol, heer-degmo iyo heer-maamul magaalo oo uu hogaaminayay madax-weynaha DDS, Musdafe Muxumad Cumar, waxay booqasho maalin qaadatay ku tageen, tuulooyinka Qabaalle iyo Carrada-madow, oo ka tirsan degmada koonfurta Jigjiga.
Deegaanadan ayaa waxaa ku nool shacab soomaaliyeed, oo u badan muruq-maal wax soosaar wayn leh, oo dhinac marka laga fiiriyana leh isku filaansho xirfadeed oo ay ku maareeyaan noloshooda, waxayna xirfadahooda shaqo hal bowle u ahaayeen nolosha shacabka Soomaaliyeed meel kasta iyo waa kasta oo ay joogeen, inta la xasuusto.
Hase ahaate, shacabkan soomaaliyeed oo ku dhaqan deegaan kasta oo Soomaali degantahay, ayaa waxaa ay yihiin kuwo ladaala dhacaya faquuq iyo takoor ba’an oo ay walaalahooda Soomaaliyeed ku hayeen taariikhda inta la xasuusanyahay, hayb-soocan dulmiga ku dhisani ma ah, mid lagaran karo xiliga uu soo bilaabmay iyo sababta uu u bilaabmay, iskaba daa inuu ahaado mid mabda’ iyo aragti ku salaysane, lamana hayo ilaa maanta dhaq-dhaqaaqyo iyo ololayaal midaysan oo Soomaliyeed oo lagu doonayo in xayndaabkaas dulmiga ah lagu jabiyo, marka laga tago dareenka ah in dulmigaasi uu yahay mid an waafaqsanayn diinta islaamka iyo walaatinimada umada Soomaliyeed.
Booqashadanina waxay qayb ka dahay, dadaalo ay xukuumada Deegaanka Soomalidu ku doonayso, inay muujiso fool-xumada ay leedahay in dad aan Diin, Midab, Af iyo dhaqanba an waxbaa kaga gadisnayn ay tahay in guumays intaa la eg lagu hayo mudo boqilaal sano ah, isla mar ahaantaasna lala qaybsado dareenka xanuunka leh ee ay qabaan, iyado xukuumaduna dhankeeda balan qaaday in ay il gooni ah ku hayn doonto shacabkan oo Deegaanka si wayn ugu nool.
Hadaba, ka gilgilashada dulmigan iyo hayb-soocan ma ah mid uu yaala DDS iyo ama maamul Soomaliyeed oo kale, ee wa mid dul hoganaysa qof kasta oo soomaliya oo xiskiisu taam yahay, hase ahaate su’aasha u baahan in laga jawaabo ayaa ah, ilaa goorma ay dadkani ku hoos-noolaan doonaan faquuqa iyo bahdilka fac-tirsaday ee walaalahood.?
Ethiopia passes gun control law to tackle surge in violence – Reuters
Indian Navy Rescues Dhow Adrift Near Somali Coast – The Maritime Executive
Madax weynaha DDS oo ka qayb galey maanta xaflada qalin jabinta ciidanka gaarka ah.